ग्रीक टापु छुट्टीहरु | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | ग्रीस, टापुहरू
जब हामी यात्रा को लागी सोच्दछौं ग्रीस स्पष्ट रूपमा हामी उनीहरूको आश्चर्यलाई बाहिर राख्न सक्दैनौं टापुहरू। र त्यहाँ धेरै छन्, एक अर्को भन्दा सुन्दर, यति धेरै हेर्न र रमाईलोको साथ ... तर कसरी तपाईं त्यसोभए कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ ग्रीक टापु सूचीमा राख्न र जुन यसबाट लिनु पर्छ
को ग्रीक टापु तिनीहरू आज हाम्रो गन्तव्य हो, त्यसैले यदि तपाईंले गर्मी मा कहाँ जाने भनेर सोच्नुभएको छैन भने, आकाशको निलो र भूमध्यसागरको निलोलाई कसरी विशिष्ट भूमध्य टापु भवनहरूको शुद्ध सेतोसँग मिलाउने बारेमा?
1 ग्रीक टापु
2 साइक्लेड टापुहरू
3 डोडेकन टापुहरू
4 आयनियन टापु
5 सारोनिक र उत्तर एजियन टापुहरू
6 स्पोराडेस टापुहरू
सिद्धान्तमा, यो स्पष्ट गर्न लायक छ कि यो एक वा दुई टापु होइन। हजारौं छन्, केहि छ हजार सटीक हुन। तसर्थ, ती सबै भेट्न असम्भव छ। र आवश्यक छैन। यो मूलतः को बारे मा छ एजियन, आयोनियन, सरोनिक, डोडेकनीज, साइक्लाडिक र स्पोराडेस टापुहरू। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये चीओस, क्रेट, युबिया, रोड्स र लेस्बोस हुन्।
सारोनिकहरू एथेन्सको नजीक छन्, साइक्लाडीस एउटा ठूलो समूह हो जुन एजियनको केन्द्रमा छ, डोडेकन टर्की र क्रेटको बीचमा छ, स्पोराडेस थेस्सलोनिकी र एथेन्सको बीचमा छ, र इओनिहरू इटालीको नजिक छ।
क्रेट यो समुद्री तटको टापु हो र ग्रीक टापुहरूको सबैभन्दा ठूलो र सम्पूर्ण भूमध्यसागरमा पाँचौं ठूलो हो। तपाईं पिरियसबाट, एथेन्सको बन्दरगाह, चानियासम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। यो नौ घण्टाको यात्रा हो। तपाई हेराक्लिओनमा पनि जान सक्नुहुन्छ, यो अलि सस्तो छ तर यसले एकै समय लिन्छ। यो जहाजमा सिधा टिकट किन्न सिफारिस गरिएको छ, जब तपाईं टापुहरूको वरिपरि यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा, तपाईं विमानबाट पनि जान सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई मनपर्‍यो भने समुद्री तट जीवन क्रेट सबै भन्दा राम्रो हो। चनिया शहर सुन्दर छ, एक धेरै सुरुचिपूर्ण भेनिस-शैली समुद्री किनार छिमेक र एक सुर्य लाइटहाउसको साथ। यसको समुद्री तटहरू अद्भुत छन्, त्यहाँ गुलाबी बालुवा सहितको एक छ, एलाफोनिसी, यद्यपि तपाईं माथि र तल चट्टानहरूमा जान इच्छुक हुनुपर्दछ। यसका दुई शहरहरू भन्दा पर, चानिया र हेराक्लिओनयदि तपाईं एक हप्ता भन्दा बढि बस्नुभयो भने, तपाईं निश्चित रूपमा अगाडि जान सक्नुहुन्छ र अन्य शहर र गाउँहरू चिन्न सक्नुहुन्छ।
साइक्लेड टापुहरू पनि एक लोकप्रिय गन्तव्य हो किनभने तिनीहरू एथेन्सको नजिक छन् र एक अर्काको नजिक पनि। म बोल्छु डेलोस, Ios, Kea, Mykonos, Amorgos, Anafi, Paros, Naxos, Santorini, Syros र केहि अधिक। उही समान, तपाईं पिरियसमा डु can्गा लिन सक्नुहुनेछ र औसत चार घण्टा तपाईं पारोस आइपुग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट एक घण्टामा तपाईं केवल Naxos मा हुनुहुन्छ र दुई घण्टामा तपाईं सुन्दर सान्तोरिनीमा आइपुग्नुहुनेछ।
Ios एक मोती हो, समुद्र तट गन्तव्य पनि। यदि तपाईं भित्र बस्नुहुन्छ Santorini तपाईं ब्याकप्याकरहरूको लागि यस गन्तव्यमा सुपर द्रुत रूपमा पुग्नुहुन्छ जो केवल सूर्यको खोजी गर्दै छन् र रातमा भोज मनाउँदैछन्। रो यो यसको मुख्य शहर हो, रमाईलो र पहाडमा तंग छ, यसको सुरम्य पवनचक्कीको साथ पारंपरिक। यो चर्चहरूले भरिएको छ र माथिको दृश्यहरू हेर्ने कुरा हो। कम्तिमा २० समुद्री किनारहरूको साथ, आइओएस तपाईंको सूचीमा हुनुपर्दछ।
साइक्लेडमा अन्य सम्भावित गन्तव्यहरू हुन् Kea, एथेन्सबाट केवल एक घण्टा, जंगली र हरियो, मिलोसस्पष्ट रूपमा, करीव be० समुद्री तटहरू सहित Mykonos, समलिays्गीहरूका लागि तर परिवार र साथीहरू पनि राम्रो समय चाहान्छन्, डेलोस र यसको पुरातात्विक साइट, Naxos, एथेन्स देखि साढे तीन घण्टा, पारस, सानो तर सपना समुद्र किनार, र स्पष्ट सन्तोरिनी यसको लक्जरी होटल र प्रभावशाली Caldera को आफ्नो दृश्य संग।
सूर्य यहाँ चम्किन्छ, दुबै जाडो र गर्मीमा। त्यहाँ केहि छन् 15 द्वीपहरू समूहमा, पुरानो, र सय भन्दा बढी टापुहरु। तिनीहरू यस समूहका हुन् कोस, कर्फाटोस, लीरोस, रोडस, टिलोस र चाल्की, अरु माझ। छ रोमन र ओटोम्यान भूत र यसको संस्कृतिले यसलाई मठ, गाउँहरू, दरबारहरू र किल्लाहरू जताततै प्रतिबिम्बित गर्दछ।
Kos यो एक राम्रो गन्तव्य हो यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तातो स्प्रिंग्स र आरामदायी जीवन। त्यहाँ समुद्री किनारमा पनि तातो स्प्रि drive्गहरू छन्, कोसको बन्दरगाहबाट आधा घण्टाको दूरीमा। त्यहाँ बालुवा बीच धेरै पोखरीहरू छन् र यो महान छ। थप रूपमा, त्यहाँ पुरानो र मध्ययुगीन भग्नावशेषहरू छन्, सेन्ट जोनको अफ अर्डरको किल्ला महल, जोन तपाईं चक्र, हिंड्न र आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अधिक परिचित दिनचर्याका लागि त्यहाँ लिरोस छ।
Leros टर्की को सुपर निकट छ र यो धेरै प्रख्यात छैन तर यदि तपाईं थोरै पर्यटन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंको गन्तव्य हो। यसमा अरू टापुहरूबाट सबै थोक छ; समुद्र तट, गाउँहरू, समुद्री खाना र सौन्दर्य, तर पर्यटन बिना। वा कमसेकम यति धेरै पर्यटन बिना। हवाईजहाजबाट तपाईं एथेन्सबाट minutes 45 मिनेटमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ र फेरीबाट यो १ long घण्टा लामो हुन्छ। स्पष्ट छ, रोड्स यहाँ अनुपस्थित हुन सक्दैन।
रोड्स इतिहासको पर्यायवाची छ। पुरानो शहर हो विश्व सम्पदा युनेस्कोका अनुसार र यहाँ तपाईको सुलेमान मस्जिद, क्यासल अफ द नाइट्स अफ रोड्स र साइट जुन पुरानो विश्वका सात आश्चर्यहरु मध्ये एक थियो, प्रसिद्ध थियो। रोड्सको कोलोसस।
तर रोड्समा समुद्र तट र अति सुन्दर पनि छ: उदाहरणका लागि, लिन्डोस पुरानो शहरको बसबाट एक घण्टाको दूरीमा छ र विश्वको सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक हो। यो टापु धेरै हनीमून र परिवारहरूले छनौट गर्दछ तर रातमा रातको जीवन पनि हुन्छ।
जम्मा त्यहाँ सात टापुहरू छन् जुन देशको पश्चिमी तटमा छन्: किथिरा, जाकिन्थोस, केफलोनिया, कोर्फु, पाक्सोस, इथाका र लेफकाडा। उनको धेरै परिदृश्य ग्रीस को पोस्टकार्ड बनेको छ। यो जाकिन्थोसको सुप्रसिद्ध शिपब्रक बिचको मामला हो जुन तपाईं तल देख्नुहुन्छ। कस्तो शानदार!
केफलोनिया पनि सुन्दर र ठूलो छ। तपाईंको पोर्ट, फिस्कार्डोयो मनमोहक हो, र यस टापुमा सामान्यतया सुन्दर समुद्र तटहरू छन्, केहि अविकसित र टाढा, एक्लै हराउनको लागि आदर्श। र यदि तपाईले अन्वेषण गर्न चाहानुहुन्छ तपाईले यो जान्न सक्नुहुन्छ मेलिसानिया गुफा भूमिगत ताल वा Assos को महल।
लेफकाडा ग्रीक टापुहरूको सब भन्दा क्यारिबियन मानिन्छ। त्यहाँ सेतो चट्टानहरू छन् जसमा हरियो घाँस, पीरोजा समुद्र, र महाकाव्य सूर्यास्तले सजाइएको छ। बार, रेस्टुरेन्ट र होटलहरू थप्नुहोस् र तपाईंसँग एउटा अविश्वसनीय प्याकेज छ।
सारोनिक र उत्तर एजियन टापुहरू
उत्तर एजियन टापुहरूमध्ये एक हो चियोस, इकारिया, लेस्बोस, लेमनोस, थासोस, पारा वा सामोसउदाहरण को लागी। होमर चियोसमा जन्म भएको थियो र उनको ११ औं शताब्दी मठ विश्व विरासत साइट हो। सामोस टर्कीबाट ढु stone्गा फ्याँकिएको छ र यसमा अविस्मरणीय कुनाहरू छन्। यसको आफ्नैमा, थासोस एउटा सस्तो र थोरै ज्ञात टापु हो।
र अन्तमा त्यहाँ सारोनिक टापुहरू छन्, जुन उनीहरू एथेन्सको धेरै नजिक छ किनकि क्लासिक सप्ताहन्त वा छुट्टीको लागि छुट्ने ठाउँ हुन्। पोरोस, सलामिना, Spetses, हाइड्रा, Agistri र एजिना उनीहरूको नाम हुन्। एजिनेस ira 45 मिनेट मात्र Piraeus बाट फेरी द्वारा।
यो २ 24 टापुहरूमा मात्र एउटा सानो द्वीपसमूह हो जुन सबैभन्दा लोकप्रिय एस को रूपमा छकोपेलोस, स्काइरोस, स्किताहोस र एलोनिसोस। स्कोपेलोस र एलोनिसोस जहाँ छर फिल्माएको मम्मा मिया!उदाहरण को लागी, ताकि तपाईं यसको सुन्दरताको एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हिंड्न चाहानुहुन्छ भन्ने लेखमा फोटोग्राफहरू हेर्नको लागि पर्याप्त छ, तर तपाईंले पढ्नुभएझैं यी टापुहरूमा प्राकृतिक सुन्दरता र धेरै इतिहासहरू छन्। तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुराको निर्णय गर्ने कुरा हो वा कति चीज तपाई प्रत्येक चीजलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। फेरी वा प्लेन वा टापुहरू जाँच गर्नुहोस् जुन क्रूजमा भ्रमण गरिन्छ, जुन यो विकल्प हो जुन तपाईं आफैले गर्न चाहनुहुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » ग्रीस » ग्रीक टापुहरु छुट्टीहरु